Chevrolet ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD, Chevrolet ကားနှစ်ဦးအောင်ဒင်က Android ကား DVD, Chevrolet ကားကို Android 4.4.4 မော်တော်ကား DVD ၏တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ဖေါ်ပြချက်:Chevrolet ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD,Chevrolet ကားနှစ်ဦးအောင်ဒင်က Android ကား DVD,Chevrolet ကားကို Android 4.4.4 မော်တော်ကား DVD,Chevrolet ကားကို Android 4.2 ကား DVD,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Chevrolet ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD
Chevrolet ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, Chevrolet ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD, Chevrolet ကားနှစ်ဦးအောင်ဒင်က Android ကား DVD ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Chevrolet ကားကို Android 4.4.4 မော်တော်ကား DVD R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Carplay ဖြင့် S10 D-MAX အတွက် Android dvd ရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chevrolet Silverado Plateado အတွက် Android ကားမာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Capativa 2012 - 2016 အတွက် Android ဌာန  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2019 Hot octa-core ကားတစ်စီး DVD player လှည့်ဖျား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Aveo များအတွက် dash ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာစနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
S10 ဟာ android 9.0 2din ကားတစ်စီးအသံဖိုင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
2015 ဟာ android 9.0 Aveo ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ system ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CRUZE 2008-2011 ဘို့ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Captiva ဘို့ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
S10: D MAX 2017 ဘို့ Oreo ကားတစ်စီး autoradio  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Malibu 2015 မှာ Android ကားတစ်စီး DVD ရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chevrolet ကား Cruze 2015 သည်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chevrolet ကား Capativa အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chevrolet ကား Malibu 2015 သည်ကားကိုပေး Audio Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chevrolet ကား Cruze သည် GPS စနစ်ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chevrolet ကား Malibu 2015 8 လက်မသီးခြားကားတစ်စီး DVD player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chevrolet ကား S10 2013 D-MAX ဘို့မော်တော်ကားအသံအီလက်ထရောနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chevrolet ကား Aveo & Epica & Captiva ဘို့ကားတစ်စီး DVD Player ကို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက်ကား DVD Player ကို Chevrolet ကား CRUZE  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chevrolet ကား CRUZE 2015 မော်တော်ကားအသံအီလက်ထရောနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chevrolet ကား Cruze 2008-2011 သည်ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Carplay ဖြင့် S10 D-MAX အတွက် Android dvd ရေဒီယို
Carplay ဖြင့် S10 D-MAX အတွက် Android dvd ရေဒီယို ပံ့ပိုးမှုစင်တာ GPS + ရေဒီယို + Bluetooth + USB + AUX + DVR ထည့်သွင်းမှု + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency:...
Chevrolet Silverado Plateado အတွက် Android ကားမာလ်တီမီဒီယာ
Chevrolet Silverado Plateado 2014-2019 အတွက် Android ကားမာလ်တီမီဒီယာ Support GPS + Radio + Bluetooth + USB + AUX In + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP OS: Android9စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက...
Capativa 2012 - 2016 အတွက် Android ဌာန
Capativa 2012 - 2016 အတွက် Android ဌာန အွန်လိုင်း၊ အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံကိုသုံးခြင်းသို့မဟုတ်မြေပုံကဒ်ဝယ်ခြင်းဖြင့်သွားလာမှုကိုရနိုင်သည်။ Car dvd player သည် Google Maps, Waze စသည်တို့ကဲ့သို့သော navigation applications များအားလုံးကိုလျင်မြန်စွာ run...
2019 Hot octa-core ကားတစ်စီး DVD player လှည့်ဖျား
2019 Hot octa-core ကားတစ်စီး DVD player လှည့်ဖျား 1.DAB: ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံထုတ်လွှင့်မှုအတွက်က Short, အသံလွှင့်ရေဒီယို station တစ်ခုအဆင့်မြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရေဒီယိုနည်းပညာအဖြစ် DAB ်ရောက်စွက်ဖက်ပြဿနာတွေနဲ့ signal ကိုဆူညံသံလျော့ချပေးဖို့ features...
Aveo များအတွက် dash ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာစနစ်
Vitara ကျော်ကြားသည် android 9.0 ကားတစ်စီးအသံဖိုင် 1.DAB: ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံထုတ်လွှင့်မှုအတွက်က Short, အသံလွှင့်ရေဒီယို station တစ်ခုအဆင့်မြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရေဒီယိုနည်းပညာအဖြစ် DAB ်ရောက်စွက်ဖက်ပြဿနာတွေနဲ့ signal ကိုဆူညံသံလျော့ချပေးဖို့ features...
S10 ဟာ android 9.0 2din ကားတစ်စီးအသံဖိုင်
S10 ဟာ android 9.0 2din ကားတစ်စီးအသံဖိုင် 1. ဒီဟာ android 9.0 2din ကားတစ်စီးအသံ S10 ။ ထိုသို့စနစ်က Android 9.0 အသစ်ဖြစ်၏။ အင်တာနက်ကိုသင်တို့အဘို့လွယ်ကူပြီးချောမွေ့စွာအင်တာနက် access ကို browser ကို, အွန်လိုင်းဗီဒီယိုများ watch,...
2015 ဟာ android 9.0 Aveo ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ system ကို
2015 ဟာ android 9.0 Aveo ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ system ကို 1. 2015 ခုနှစ် Aveo ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာစနစ်က android 9.0 အထောက်အပံ့များ GPS အညွှန်း function ကိုအဘို့ဤသည်ကားကို DVD player ။ အဘို့ဒီကား DVD GPS အရည်အသွေးမြင့်ဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ 12...
CRUZE 2008-2011 ဘို့ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင်
CRUZE 2008-2011 ဘို့ကားတစ်စီး DVD player ထိတွေ့မျက်နှာပြင် CRUZE ထောက်ခံမှုများအတွက် DVD ကို Player ကိုအွန်လိုင်းနှင့် Off-line ကိုအညွှန်း app ကို 3D မြေပုံနှင့်စကားသံကိုလမ်းညွှန်မှုကိုထောကျပံ့,...
Captiva ဘို့ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player
Captiva ဘို့ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ DVD player Captiva ထောက်ခံမှုဘလူးတုသ်ခေါ်ဆိုခ / အသံပြဇာတ်, Sync ကိုဖုန်းစာအုပ်, ပြင်ပမိုက်ခရိုဖုန်းအဘို့ဤယူနစ်ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာ။ Captiva များအတွက်ကားတစ်စီးအော်တိုမာလ်တီမီဒီယာပေါ်တွင်သင်၏ဖုန်းကို...
S10: D MAX 2017 ဘို့ Oreo ကားတစ်စီး autoradio
S10: D MAX 2017 ဘို့ကို Android 8.0 ကားတစ်စီးအညွှန်း 7dynamic backgrouds ရရှိနိုင်ပါ: - ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ - S10: D MAX 2017 ဘို့ 1Android 8.0 ကားတစ်စီးအညွှန်း။ ဖောက်သည်လည်းနောက်ခံအဖြစ်၎င်းတို့၏ရုပ်ပုံများကိုသုံးနိုင်သည်။ 2....
Malibu 2015 မှာ Android ကားတစ်စီး DVD ရေဒီယို
Chevrolet ကား Malibu 2015 မှာ Android 8.0 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာ system ကို 7dynamic backgrouds ရရှိနိုင်ပါ: - ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနေသောနောက်ခံ - Chevrolet ကား Malibu 2015 1Android 8.0 ကားတစ်စီးမာလ်တီမီဒီယာစနစ်။...
Chevrolet ကား Cruze 2015 သည်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကို
Chevrolet ကား Cruze 2015 သည်အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကို android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် 1.Android ကားကို DVD Player ကိုသည် Chevrolet ကား Cruze 2015, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Chevrolet ကား Capativa အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကို
Chevrolet ကား Capativa အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကို android ဖုန်းနှင့် wince ကားကို DVD Player ကိုအပါအဝင် 1.Chevrolet Capativa အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD Player ကို, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Chevrolet ကား Malibu 2015 သည်ကားကိုပေး Audio Player ကို
Chevrolet ကား Malibu 2015 သည်ကားကိုပေး Audio Player ကို ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက်7နှစ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူကျနော်တို့ဂျပန်, ရုရှား, ယူကရိန်း, တူရကီ, စပိန်ထံမှအများအပြားတန်ဖိုး clients...
Chevrolet ကား Cruze သည် GPS စနစ်ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်
Chevrolet ကား Cruze သည် GPS စနစ်ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ် 1.GPS ကားမာလ်တီမီဒီယာစနစ်သည် Chevrolet ကား Cruze ဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD ပလေယာအတွက် 7...
Chevrolet ကား Malibu 2015 8 လက်မသီးခြားကားတစ်စီး DVD player
Chevrolet ကား Malibu 2015 8 လက်မသီးခြားကားတစ်စီး DVD player android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Chevrolet ကား Malibu 2015 8 လက်မသီးခြားကားတစ်စီး DVD player များအတွက် 1.Our အန်းဒရွိုက်ကားကိုဒီဗီဒီ, ဒီဇိုင်း,...
Chevrolet ကား S10 2013 D-MAX ဘို့မော်တော်ကားအသံအီလက်ထရောနစ်
Chevrolet ကား S10 2013 D-MAX ဘို့မော်တော်ကားအသံအီလက်ထရောနစ် Chevrolet ကား S10 2013 D-MAX အဘို့ကားအသံအီလက်ထရောနစ်များအတွက် 1.Our အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း,...
Chevrolet ကား Aveo & Epica & Captiva ဘို့ကားတစ်စီး DVD Player ကို
Chevrolet ကား Aveo & Epica & Captiva ဘို့ကားတစ်စီး DVD Player ကို Chevrolet ကား Aveo & Epica & Captiva အဘို့ကား DVD Player ကိုများအတွက် 1.Our အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း,...
အန်းဒရွိုက်ကား DVD Player ကို Chevrolet ကား CRUZE
အန်းဒရွိုက်ကား DVD Player ကို Chevrolet ကား CRUZE အန်းဒရွိုက်ကား DVD Player ကို Chevrolet ကား CRUZE များအတွက် 1.Our အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD ကိုဟာ android အပါအဝင်ခြင်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD...
Chevrolet ကား CRUZE 2015 မော်တော်ကားအသံအီလက်ထရောနစ်
Chevrolet ကား CRUZE 2015 မော်တော်ကားအသံအီလက်ထရောနစ် android ဖုန်းနှင့်ကားကို DVD Player ကို wince အပါအဝင် Chevrolet ကား CRUZE 2015 မော်တော်ကားအသံအီလက်ထရောနစ်များအတွက် 1.Our အန်းဒရွိုက်ကားကိုဒီဗီဒီ, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ကားကို DVD...
Chevrolet ကား Cruze 2008-2011 သည်ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း
Chevrolet ကား Cruze 2008-2011 သည်ဂျီပီအက်စ်အညွှန်း 1. သငျသညျအမိန့်နေရာမီ, မက်ဆေ့ခ်ျကိုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ကားဒိုင်ခွက်၏ရုပ်ပုံကိုပြသပါ, ငါတို့သည်သင်တို့၏ car.If...
တရုတ်နိုင်ငံ Chevrolet ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD ပေးသွင်း
Chevrolet ကားများအတွက်ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမားသင်အခါတိုင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှကိုယ်ပိုင်အနေအထားကားတစ်စီးမောင်းနှင်အတိအကျသည့်အခါကိုသိနိုင်အောင်, GPS, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဂြိုဟ်တု positioning ကိုစနစ်ဟာ android 6.0 စနစ်က .Vehicle အညွှန်းနှငျ့အတူရှိ၏။ Chevrolet ကားများအတွက်ကားတစ်စီး DVD ကိုကစားသမား မော်တော်ယာဉ်အညွှန်း၏အလိုအလျှောက်ရေကြောင်းသွားလာမှုရှိပါတယ်, အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကို search function များအားသင်တစ်ဦးဖြတ်လမ်းမှခွင့်ပြု, ရုံး၏ပေါင်းစည်းမှု, unblockedly နှစ်ဦးစလုံးလမ်းညွန်ထဲမှာ run နိုင်ပါတယ်, ဖျော်ဖြေရေး function ကိုသင်အလွယ်တကူသွားလာ, ခရီးသွားလာခွင့်ပြု!
DVD စက်, ရေဒီယို receiver နှင့်အတူ Chevrolet ကားမော်တော်ယာဉ်အညွှန်းများအတွက်ကားတစ်စီးအသံ, ဘလူးတုသ်, ကိုယ်လက်-အခမဲ့, screen ကိုထိ function ကိုကိုက်ညီ, နောက်ပြန်ဆုတ်အသိဉာဏ်ဒုံးကျည်သွားလမ်း, တာယာဖိအားထောက်လှမ်း, ကို virtual ခြောက်လ discs တွေကို, နောက်ခံထိန်းချုပ်မှု function ကို! Chevrolet ကားဟာ android ကားတစ်စီး DVD လည်း BT function ကိုရှိသည်, ဘလူးတုသ် : အ panel ကိုအပေါ်တစ်ဦး built-in မိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်အတူလာကြပြင်ပ micrphone ထောက်ခံပါတယ်။ ပံ့ပိုးမှုဘလူးတုသ်က MP3 player ကိုအင်္ဂါရပ်, အင်္ဂါရပ်များနှင့်ခေါ်ဆိုသူ၏နာမကိုအမှီ display ကိုမျှဝေဘလူးတုသ်အဆက်အသွယ်။ Apple က Samsung, HTC, Sony ကစတာတွေကနေစမတ်ဖုန်းအပါအဝင်ဘလူးတုသ် 2.0 သို့မဟုတ်အထက်နှင့်အတူ device ကို, ဘလူးတုသ်အသံ output ကိုထောက်ပံ့သောစမတ်ဖုန်းတွေနဲ့သာလိုက်ဖက် MP3 ကိုပြန်ဖွင့်နှင့်အတူလိုက်ဖက်တဲ့။ ပံ့ပိုးမှုအရှိဆုံးဘလူးတုသ် ELM 327 ။
မော်ဒယ်: Chevrolet ကား cruze 2015 cruze 2008-2011, မော်တော်ကား Navi ကစားသမား Chevrolet ကား S10 / Isuzu ကား D-Max များအတွက် 2013-2014 / AVEO 2002-2011 / EPICA 2006-2011 / LOVA 2006-2011 / Capativa 2006-2011 / Sparks 2005 ဘို့ကားတစ်စီးအသံဖိုင် -2008 / OPTRA 2002-2011
Chevrolet ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD Chevrolet ကားနှစ်ဦးအောင်ဒင်က Android ကား DVD Chevrolet ကားကို Android 4.4.4 မော်တော်ကား DVD Chevrolet ကားကို Android 4.2 ကား DVD Ford ကားအန်းဒရွိုက်ကား DVD